SomaliTalk.com » 2012 » December » 01
Home » Archive Maalinta December 1st, 2012
Shirkii Jigjiga ma la odhan karaa Xabsi Maxaabiista ku Jirtaa ay Hal Xuquuq ah la haayeen,?
Waxaa markaliya kasoo muuqday shaashada idaacadaha la iska arko & Websites uu maamusho xukuumada ethiopia & kuwa xidhiidh qotodadheer la leh maamulka gumaysiga ethiopia shir lagu qabtay magaalada Jigjiga oo loogu magac bixiyay shirka wadatashida xukuumada & shacabka. Waxaa magaalada jijiga lagu soo ururiyay dadwayne aad u tiro badan oo laga kala keenay gobolada & tuulooyinka Soomaalida...
Dhismaha Safaaradda Soomaalida ee Roma oo Shirkad Talyaani ah laga kireeyey muddo 18-sano ah
Nuur Cadde, safiirka DFS u fadhiya Roma ayaa qiran in safaaradii Soomaalida laga kireeyey dad Talyaani ah. Dhismaha daartaasi waxaa mulkiyadeeda leh qaranka Soomaaliyeed, waxaase hadda lagu wareejiyey shirkad shisheeye oo muddo 18-sano ah deganaan doonta. Arrintaas warbixinteeda ka aqri qormada hoose oo ay isku soo dubaridey Muna Abshir Abdi. Dhismaha Safaaradda Talyaaniga Ee Soomaaliya Ma Nuur Cadde...
Shirka Jigjiga: Dhaqan Liinbaxay mise Dhimir dhalan Rogan
Cabdi Gorod wuxuu ahaa Gabayaa midho culus Gayiga Soomaali Galbeed “Ogaden” idayl ahaantiina magac iyo maamuus wayn ku leh. Isaga oo la fakaloolsan hadba xaajo aan Oday ka soo gaadh ahayn (Xaajo-Ugub), ayaa maskaxda Gabayaagan waxaa ka soomaxay xigmad guun ah Gayiga Soomaalida na aad ugu baahday. Waxaa kamid ahaa tuducyadan hoos ku xusan sida: “Nin adduun ku noolow maxaa aragti kuu laaban,...
HUBSIIMO HAL BAALA SIISTAY
(Waxa qoray Cabdalla Xaaji Cusmaan) Waxa dhawaan degellada Soomaalida qaarkood ku soo baxay maqaal uu qoray qoraageenna Yuusuf Ibraahim (Hawd). Maqaalkaas oo cinwaan kiisu ahaa « Daraawiishi yaa ay ahayd ? »uuna kaga hadlay Ina Cabdille Xasan iyo daraawiishtii uu hoggaaminayey iyo aragtiyaha kala duwan ee laga qabo.Qoraagu bilawga maqaalkiisa waxa uu ku sheegay inuu soo akhriyey buug dhawaan...